‘चपली हाईट ३’हेर्न फिल्मकर्मीको आग्रह, दर्शक आउँलान् ? « Ramailo छ
‘चपली हाईट ३’हेर्न फिल्मकर्मीको आग्रह, दर्शक आउँलान् ?
फिल्म ‘चपली हाईट ३’ शुक्रबारदेखि प्रदर्शनमा आएको छ । अर्जुन कुमारको निर्माण र निकेश खड्काको निर्देशनमा बनेको सस्पेन्स थ्रिलर फिल्मले देशका मल्टिप्लेक्समा राम्रो शो संख्या पाएको छ ।
फिल्म ‘चपली हाईट ३’ ले क्युएफएक्स अन्र्तगतका हलहरुमा शनिबार झण्डै तीस भन्दा बढी शो पाएको छ । शुक्रबार पनि फिल्मले शो सुखद पाएको छ । निर्माता अर्जुन कुमारले दर्शकलाई हलसम्म गएर फिल्म हेर्न आग्रह गरेका छन् । निर्माता कुमारसँगै नेपाली फिल्मका सबै जसो फिल्मकर्मीले ‘चपली हाईट ३’ हेर्न सामाजिक सञ्जालमा आग्रह गरेका छन् । नेपाली फिल्मकर्मीको आग्रहलाई दर्शकले स्विकार गर्लान् त ?
फिल्म ‘चपली हाईट ३’ मा स्वस्तिमा खड्का, अमिर गौतम, सुपुष्पा भट्ट, महेश त्रिपाठी, प्रतिकमान श्रेष्ठ लगायत कलाकारहरुको अभिनय छ ।